နေ့: ဇန်နဝါရီလ 21, 2020
Erciyes တက္ကသိုလ် (ERÜ) နှင့် Kayseri Erciyes A.Ş. တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနှင့်ဘွဲ့ရများ၏အရည်အချင်းကိုမြှင့်တင်ရန်“ အလုပ်အကိုင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး” protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Kayseri Erciyes A.Ş. ERU ၏ပါမောက္ခချုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအဆောက်အ ဦး တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ [ပို ... ]
၂၂ ရက်အကြာတွင် Metro ၀ န်ထမ်းများပျောက်ဆုံးနေသောဖုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
Metro ၀ န်ထမ်းများကလွန်ခဲ့သော ၂၂ ရက်ကသူ၏ဖုန်းပျောက်ဆုံးသောခရီးသည်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကင်မရာမှတ်တမ်းများမှဖုန်းကိုခိုးယူသူကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သောအရာရှိများကသူအားအခြားဘူတာရုံတွင်သူတစ် ဦး တည်းမြင်သည်နှင့်ရဲအားအကြောင်းကြားကာသူ့ကိုဖမ်းမိရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ 22 [ပို ... ]
Kadıköy Moda ရထား၏ခရီးသည်သယ်ဆောင်နိုင်မှုတိုးလာသည်
Kadıköy Moda Tram လိုင်းတွင်ရထားရထားအရေအတွက်တိုးလာသည်။ တစ်နေ့တာ၏အလုပ်များနေသည့်အချိန်တွင်လှည်း ၃ စီးဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောခရီးသည်များသယ်ဆောင်နိုင်မှုမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာသည်။ ကာဒစ်ကိုနှင့်မိုဒါအကြားအမှုဆောင်ခြင်း [ပို ... ]
တူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ Its က၎င်း၏ကြီးထွားမှုလှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကဏ္ representatives ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်သည့်ပုံရိပ်ဆွဲလေ့ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလူသိများသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကဏ္ the ကိုကမ္ဘာ၏ဒိုင်းနမစ်များနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲအကဲဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ နှစ် ဦး စလုံးကွဲပြားခြားနားပါသည် [ပို ... ]
ခံတွင်းနှင့်မသန်စွမ်းသူများအမြဲတမ်းလုပ်သားများ (သန့်ရှင်းရေးအရာရှိ) ပါးစပ်စစ်ဆေးမှု၏မူလနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ရလဒ်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနမှကြာသပတေးနေ့၊ ၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ စတုတ္ထထပ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ [ပို ... ]
Yandex Navigation သည်အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးရှိသောဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းများကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်
ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနေရာများကနေ Yandex တူရကီရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးအညွှန်း applications များကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကသူတို့နောက်လိုက်များနှင့်အတူမျှဝေဖို့ရောက်နေပါတယ်။ yandexnavigasyon.com.tr တွင်တစ်နှစ်တာအတွင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုသက်သာစေရန်နှစ် ဦး စလုံး [ပို ... ]
Cappadocia ကိုလည်ပတ်ခြင်းသည်အခြားသောစကြာ ၀ universeာကိုလည်ပတ်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ဤသို့သောထူးခြားသည့်နေရာရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းသည်။ ဒီမှာမြေအောက်မြို့ကြီးတွေမှာလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်၊ ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်တွေကြားထူးခြားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးနိုင်တယ်။ [ပို ... ]
Balıkesir Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်၌ကူးစက်ရောဂါများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်လုပ်ဆောင်သောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကိုသယ်ဆောင်ရန်ဘက်တီးရီးယားအရွယ်အစားသို့သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Balıkesir Toplu Dağıtım A.Ş. , Balıkesir Metropolitan Municipality ၏တွဲဖက်များထဲမှတစ်ခု။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
Alanya ရှိ Antalya Metropolitan Municipality ၏တော်လှန်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်အပြီးတွင်Kargıcak-Mahmutlar-Alanya အကြားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါလမ်းကြောင်းများနှင့်မြို့ပြကဒ်စနစ်ကိုလည်းအသစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Alanya နှင့် Kargicak နှင့် Mahmutlar ကြားတွင်ရှိသည်။ [ပို ... ]
Ankara မြို့ပြစီးပွားဖြစ် Taxi စစ်တမ်းကိုဖွဲ့စည်းထားသည်
မြို့တော်တွင်လုံခြုံစိတ်ချ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ရည်ရွယ်သော Ankara Metropolitan Municipality သည်အငှားယာဉ်မောင်းများ၏ပြsolveနာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ပြင်ဆင်ထားသောလမ်းညွှန်ချက်အပေါ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုရရှိရန်“ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတက္ကစီမေးခွန်းလွှာ” ကိုစီစဉ်သည်။ [ပို ... ]
နောက်ဆုံးထိတွေ့မှုသည် Salihli ရှိBülent Ecevit Köprülüလမ်းဆုံတွင်တည်ရှိပြီး Manisa မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှတည်ဆောက်ထားသည်။ Manisa မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Ali Öztozluနှင့် Salihli မြို့တော်ဝန် Zeki တို့သည်ယနေ့စာမေးပွဲတွင်တွေ့ရစဉ် [ပို ... ]
Gaziantep TEKNOFEST 2020 မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့သည်
Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တူရကီ၏ဖောင်ဒေးရှင်း (T3 ဖောင်ဒေးရှင်းမှ), Gaziantep အတွက်စက်တင်ဘာလ 2020 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေကြောင်း, အာကာသနှင့်နည်းပညာပွဲတော်ရဲ့ teknofest ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်နည်းပညာအဖွဲ့နည်းပညာအားဖြင့်တည်ခင်းဧည် [ပို ... ]
TMMOB သည် Kanal Istanbul ကိုဆန့်ကျင်သောအမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် TMMOB Istanbul Provincial Coordination Board မှ ၁ / ၁၀၀၀၀၀ Istanbul Environment Plan Change နှင့် Kanal Istanbul EIA အပြုသဘောဆောင်သောဆုံးဖြတ်ချက်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဗိသုကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း Istanbul Büyükkent [ပို ... ]
TCDD ၁။ ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာMeriçliသည်ပါမောက္ခŞahinသို့လည်ပတ်ခဲ့သည်
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) 1 ဒေသဆိုင်ရာ Manager ကို Levent Meriçl, Tekirdag Namik Kemal တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်သမ္မတနိုင်ငံ ဒေါက်တာ သူသည်MüminŞahinသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ ပါမောက္ခချုပ်သို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အတွင်းအပြန်အလှန်အမြင်များဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ Levent [ပို ... ]